Mohamed Salah Oo Laga Reebay Xiddigaha Ku Guuleysanaya Kabta Dahabka Ah Xilli Ciyaareedkan - Laacib
HomeWararka CiyaarahaMohamed Salah Oo Laga Reebay Xiddigaha Ku Guuleysanaya Kabta Dahabka Ah Xilli Ciyaareedkan
Xiddiga Liverpool ee Mohamed Salah ayaa laga reebay ciyaaryahannada ku guuleysanaya kabta dahabka ah ee gool-dhalinta horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan, taas oo hadda yahay ciyaartoyga hoggaaminaya isaga oo dhaliyey toddoba gool oo ay kaliya Jamie Vardy isku mid yihiin.
Mohamed Salah ayaa siddeed kulan oo horyaalka ah waxa uu saxeexay toddoba gool, waxaana uu kusii daray laba gool oo kale oo Champions League ah. Labadii kulan ee Manchester City iyo Leicester City.
29 jirkan ayay dadka ciyaaraha gorfeeyaa ku tilmaameen ciyaartoyga ugu wanaagsan illaa hadda xilli ciyaareedkan, haddii se ay uu doonayo inuu heerkaas gaadho waa oo uu noqdo ciyaartoyga ugu wanaagsan waa inuu sii wado bandhiggaas.
Sidaas oo ay tahay, halyeygii England ee Joe Cole ayaa Mohamed Salah ka saaray liiska ciyaartoyda ku guuleysan karaya kabta dahabka ah ee Premier League, waxaanu iskugu soo koobay laba laacib oo kale oo qaabka ay ku bilowdeen xilli ciyaareedku uu fiicnaa balse kulamadan dambe laga dareemayo daal iyo hoos u dhac.
Joe Cole waxa uu sheegay in kabta dahabka ay u dhaxayso Romelu Lukaku oo Chelsea ah iyo Cristiano Ronaldo, waxaanu yidhi: “Waxay ila tahay in midkood uu ku guuleysan doono kabta dahabka ah. Iyaga ayaa noqon doona kaalinta koowaad iyo labaad.”
Mahamed abdullahi says:
Kuma raacsani fikirkaas waayo waxaan u arkaa faquuq lagu faquuqaayo laacibka islaamka diintiisu tahay waayo iskuma dhowa 2da qof uusoo qaatay iyo salah waxayna kala iftiin iyo mugdi mana sina ee ee halayska dhaafo rasistanimaďa M.Saalah ayaa uqalma sanadkan
Qaladaadka Chelsea Ee Guul-daradii West Ham , Kai Baxar Ayuu Is Gilinayaa , Silva Waa Xariif 576 viewsStreamed live 23 minutes ago
Qaladaadka Chelsea Ee Guul-daradii West Ham , Kai Baxar Ayuu Is Gilinayaa , Silva Waa …